Vaovao - Fampahalalana ho an'ny tsipika welding H
Fampahalalana momba ny tsipika welding welding H
Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina fanangonana mandeha ho azy H-andry sy ny tombony azon'ny milina fanangonana mandeha ho azy ao amin'ny masinina mitambatra: ny milina fanangonana mandeha ho azy H-beam dia mandray ny fandefasana hydraulic ho an'ny fametrahana ny tranokala sy elatra ary ny lafiny roa dia mifototra amin'ny fampifanarahana mekanika. Izy io dia afaka miantoka ny fametrahana ny sakany samihafa sy ny elan'ny elatra ao anatin'ny elanelam-potoana voatondro, ny fanodinana mandeha ho azy ary ny marina, tsy mila manitsy isaky ny mandeha (miaraka amin'ny kodiarana eccentric ho an'ny fanitsiana kely). Ny faran'ny vondrona vy miendrika H dia miaraka amina fijanonan'ny fiakarana mandeha ho azy izay azo antoka fa mifanaraka amin'ny faran'ny sokajy ny faran'ny zana-kazo sy ny lovia elatra. Ny andry fanerena ambony dia tarihin'ny làlam-pandrefesana efatra havia sy havanana mba hiantohana ny fitoniana mandritra ny famatrarana. Ny isan'ireo latabatra mihodina dia azo halavaina ary hahena arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa sy ny halavan'ny workpiece.
Ny rafitra hydraulic dia mandray ny vokatra rafitra hydraulic mahazatra amin'ny fiaraha-miasa Sino-vahiny, ary miaraka amin'ny sivana tsara mba hiantohana ny fiasa azo antoka maharitra amin'ny valizy solenoid. Ny fametrahana ny takelaka web sy elatra dia mandray ny fifindran'ny hydraulic, ary ny roa tonta dia mifatotra sy mifantoka amin'ny fampifanarahana mekanika, izay afaka miantoka ny fametrahana ny sakany sy elakelam-baravarana ao anatin'ny faritra voafaritra. Ny centering mandeha ho azy dia marina ary tsy mila ahitsy isaky ny mandeha (miaraka amin'ny fanitsiana kodiarana kely). Ny faran'ny vondrona vy miendrika H dia miaraka amina fijanonan'ny fiakarana mandeha ho azy izay azo antoka fa mifanaraka amin'ny faran'ny sokajy ny faran'ny zana-kazo sy ny lovia elatra. Ny andry fanerena ambony dia tarihin'ny làlam-pandrefesana efatra havia sy havanana mba hiantohana ny fitoniana mandritra ny famatrarana. Ny isan'ireo latabatra mihodina dia azo halavaina ary hahena arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa sy ny halavan'ny workpiece. Ny rafitra hydraulic dia mandray ny vokatra rafitra hydraulic mahazatra amin'ny fiaraha-miasa Sino-vahiny, ary miaraka amin'ny sivana tsara mba hiantohana ny fiasa azo antoka maharitra amin'ny valizy solenoid.
1.Ny fomba famokarana vy vy miendrika H dia ny fametrahana ny vy miendrika H amin'ny endrika "I", ary manjaitra kofehy roa eo an-daniny roa amin'ny fotoana iray, izay mampitombo tokoa ny fahombiazan'ny welding. Noho ny fantsom-pandrefesana simetrika dia tsy simba ny tranonkala aorian'ny fangejana.
2. Orthopedic méthanique H-miendrika vy flange straightening machine dia mahatsapa ny fanitsiana mivantana ny fihenan'ny angular ny takelaka elatra vy miendrika H aorian'ny fantsom-bozaka amin'ny alàlan'ny roller eccentric, izay mampihena ny hery fanitsiana ary manatsara ny fahamendrehan'ny fanitsiana.
3. Raha ny lafiny famaritana lasitra dia ny famaritana ho an'ny tariby H-beams no lehibe indrindra ao Shina, ary mitovy amin'ny tsipika famokarana fantsakana H-beam an'ny orinasa mpamokatra fitaovana fantsom-boaloboka (ESAB) mandroso indrindra any ivelany.
4. Ao amin'ny fomba fivoriambe, raisina ny fomba fampidirina-welding, izay mampihena ny fizotrany ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
5. Ao amin'ny fomba afovoan'ny tranokala sy ny takelaka flange, vondrona roa misy ny fomba fanentanana aloha sy aoriana no raisina hanatsarana ny fahamendrehan'ny fametrahana.
6. Ny feeder tariby dia mifamatotra moramora amin'ny fanilo fanilo ary ny zoro welding ny fanilo fanilo dia azo ahitsy.
7.Fehin-kibo fanenjana ngeza, amin'ny alàlan'ny tariby roa (DC + AC) tariby roa, arofenitra roa, fizotran'ny fantson-drano dozabe. Ireo fampiasa an'ity tsipika famokarana ity no voalohany ao Shina.
8. Izy io dia mandray ny fanaraha-maso PLC ampidirina, izay azo ianteherana sy mora ampiasaina.
9. Amin'io toha-piantsonana io ihany dia tanteraho tsy tapaka ny fizotry ny fiangonana, fangejana, fanitsiana, fampiakarana ary famoahana vy miendrika H amin'ny fizotry ny famokarana.